ပန်ဒိုရာ: September 2007
Posted by pandora at 10:58 PM3comments
Posted by pandora at 2:17 AM 14 comments
ကြင်နာတတ်တဲ့ ရင်ခွင်မှာသာ တည်သင့်တယ်
တကယ်တော့ ကဗျာရေးဖို့ မွေးဖွားလာခဲ့
ဆူးပင်တွေ တောထ မင်းမူ နေတာ မြင်မိတော့
အခုအချိန်အထိ အမေနဲ့ မတွေ့ရတော့ဘူး
ချစ်သူနဲ့ မ တွေ့ ရ တော့ ဘူး
မ - တွေ့ - ရ - တော့ - ဘူး
...... ပြီးရင် ပြန်လာခဲ့နော် ..တဲ့
စောင့် နေ တုန်း ကွယ်..။
Posted by pandora at 10:07 PM 16 comments
Posted by pandora at 9:18 PM 11 comments
Posted by pandora at 5:44 PM 16 comments
Posted by pandora at 11:59 PM 11 comments
Posted by pandora at 9:07 AM5comments
Posted by pandora at 9:46 AM 8 comments
Posted by pandora at 10:51 AM 12 comments
Posted by pandora at 2:44 PM3comments
ကိုမောင်ရင် ရဲ့ အားထုတ်မှုကို လေးစားသောအားဖြင့် ကွန်မန့်ရှည်ကြီးကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တခြားသူတွေလည်း စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်ရှိသော် ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ရှုနိုင်အောင်လို့ပါ။
အခုတလောတော့ ကိုမောင်ရင်ရဲ့ စာတွေကိုလည်း သွားဖတ် ဟိုရေးဒီရေး ကွန်မန့်မိသလို ကိုမောင်ရင်ကလည်း လာဖတ်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ အပြန်အလှန် ဘုတ် ကျီး ရိုသေနေကြတယ်လို့ ထင်လိုကလည်း ထင်နိုင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက် ရေးတဲ့စာ တစ်ယောက်က လွတ်လပ်စွာ ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်ခံစားခြင်းဟာ တကယ်တော့ ဘလော့ဂ်ကပေးတဲ့ အနှစ်သာရ တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက နားလည်မှုနဲ့ အပြုသဘောဆောင်မှုတွေပါပဲ။ ပြင်ပ အလုပ်တာဝန်တွေကြားမှာ ဘယ်သူမှ အချိန်အားရယ်လို့ မရနိုင်ကြတဲ့အတွက် ဒီလို အချိန်နောက်ထပ် ဘယ်လောက် ပေးနိုင်မလဲ မသိပါဘူး။ မောင်တိန် ပြောသလိုပြောရရင် ရာသီဥတုကောင်းပြီး လေကြောင်းသင့်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရာသီဥတု သာယာနေတဲ့အခိုက် အချိန်ယူဖတ်ရှု ခံစားထားတာလေးကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ကိုမောင်ရင် ရရှိချက်ဟာ ပန်ဒိုရာဆိုလိုချင်တာရဲ့ အနည်းဆုံး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိတယ်ဆိုတာလည်း ပြောချင်ပါတယ်။
ကဗျာအဖွင့်မှာ ဘိုင်ရွန် ဆန်သော မပျော်ရွှင်မှုဆိုတာနဲ့ စဖွင့် လိုက်တယ်ဆိုကထဲက ကဗျာရှင် နောက် တော်တော်လိုက်ယူရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်တယ်.. မြင့်တော့မြင့်တယ်.. ကဗျာအဖွဲ့ ထက်ပေးချင်တဲ့ Message ကိုပြောတာပါ..
၂ဝ ရာစုကို အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး အတွေးအခေါ်ပညာရှင်လို တင်စားတဲ့ ဘာ့(တ)ထရန် ရပ်ဆဲ(လ) နဲ့ချီလာပြီ.. ဘိုင်ရွန်နဲ့ စဖွင့်လိုက် က ထဲက လူ့ အသိုင်းအ၀န်းတစ်ခုလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဒသနတွေ၊ စိတ်မတိုက်ဆိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောချင်နေတာတွေ ပါလာတော့မယ်လို့ တွက်လိုက်တယ်…(ဒီနေရာမှာ ဘိုင်ရွန်မပျော်ရွှင်မှုများ ရဲ့ဖခင် ဘာ့(တ)ထရန် ရပ်ဆဲ(လ) ကိုတော့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လို မယ်မထင်ပါဘူး..) Nobel Prize in Literature in 1950 ပါ။ ဘိုင်ရွန်ဆန်သော မပျော်ရွှင်မှုကို ကဗျာရှင် ဘာကြောင့်သုံးထားပါသလဲ… စကားလုံးဖောင်းပွရုံသက်သက်ပဲလား.. ကြည့်ရအောင်..
ဒသနိက၀ါဒ ကို ချေပခဲ့ တဲ့ ဘာ့(တ)ထရန် ရပ်ဆဲ(လ) ရဲ့လူမှု အသိုင်းအဝန်းမှာ ဒီမိုကရေစီကျကျ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလူသားတစ်ဦးအနေ နဲ့ ရကိုရ ရမယ့်အရာ.. တိတိကျကျဆိုရရင် အောင်အောင်မြင်မြင်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်…
မရိုးဖြောင့်တဲ့ အတ္တ၀ါဒ ကို ရေသောက်မြစ် ခံထားပြီး အားလုံးမှားယွင်းနေရင်တော့ ကမ္ဘာကြီးကို စိတ်ကုန်နေလောက်အောင်မပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ နဲ့သာမွန်းကျပ်နွမ်းလျ နေလိမ့်မယ်… ဒါမှမဟုတ် ပညာဥာဏ် ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့သူ လိုမျိုး လဲ ဖြစ်ခွင့်ရှိနေသေးတာပဲ.. ဒီနှစ်ခုအကြားမျှခြေ ရှာနိုင်ဖို့ လို အပ်တယ်..
ဒါပေမယ့် ရပ်ဆဲ(လ) က ဒီ ပျော်ရွှင်မှုကိုအောင်နိုင်ခြင်း ဆိုတာ ကို ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အဆုံးစွန်ကျဆင်းမှု၊ စိတ်ဒါဏ်ရာစတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကုစားဖို့မစွမ်းတဲ့သူတွေ အတွက်ရေးခဲ့တာ တော့ မဟုတ်ဘူး။ အဖက်ဖက်က ပိတ်ဆို့ တိုက်ခိုက်မခံတဲ့ လူမျိုးတွေအတွက်သာရည်ရွယ်ခဲ့တယ်..
လူသားတွေရဲ့ပြသနာ ၊ အဓိက ကတော့ သမားရိုးကျမှာပျင်းရိငြီးငွေ့ လာမှု၊ ဗလာခံစားမှု ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ လောင်းကစား လိုမျိုး စိတ်ကျေနပ်တဲ့ ခံစားမှုတစ်ခု ရဖို အလုပ်ဒါဏ်.. ဒါဏ်ပိမှု၊့ လိုချင်တာတွေ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ များပြားလွန်းတာကရလာတဲ့ ဒါဏ် ၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ သိပ်လိုအပ်လှတာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ လောဘတွေဇောတွေ ကြောင့် ပြန်ရလာတဲ့မပျော်ရွှင်မှု၊ နောက်တစ်ခါ မကောင်းမှု အပြစ် ကို သိနေမှု…ကြောင့် ရလာတဲ့မပျော်ရွှင်မှု… မှုမမှန်စိတ္တဇ တွေနဲ့လူ့ အသိုင်းအ၀န်းတစ်ခုလုံးကျဆုံးမှု၊
အုတ်နီခဲရင့်ရင့်အရောင်တွေ … ဆိုတဲ့ သင်္ကေတ ကို စဉ်းစားကြည့်မိတယ်.. အရောင်ကိုတွေ့ မှဖြစ်မယ်.. တွေးကြည့်ပါ. နီညိုရင့်ရင့်.. ခပ်ပျစ်ပျစ်အရောင်.အဲ ဒီအရောင်က စိတ်ဓာတ်လား၊ကိုယ်ထဲက သတ္တိသွေးအရောင် လား.. သောက်လို့ရောရသလား… ဒီမြို့ ထဲမှာ…..ယူတတ်သလို ခံစားနိုင်ပါတယ်..
အင်း ဒါလဲ Fatigue တစ်မျိုးပဲ။ ဘိုင်ရွန်ထဲမှာသူလဲပါတယ်…အင်္ကျီဖြု ကတော့ရှင်းပါတယ်..ကိုထူးအိမ်သင်သီချင်းပဲကြားယောင်မိပါတယ်.. ဒီအကျီင်္ ဖြုကိုပြန်ရှက် နေရလောက်အောင် ကိုယ့်ဂုဏ်သိက်ခါကိုထုခွဲလိုက်ကြဖို့စဉ်းစားတဲ့လူတွေအကြောင်း…
လွယ်အိတ်ထဲက လက်ကျန်အကြွေတွေ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ ကိုသတိထားကြည့်ပါ။ သူကနောက်ပိုင်းမှာဇာတ်ကောင်အဖြစ်ပြန်ပါလာတယ်..လက်ကျန်ဆိုကထဲက မက်လောက်စရာတော့ သိပ်မရှိဘူး။ ထလဲကောက်မနေနဲ့ ။ ခုနက အုတ်နီခဲရင့်ရင့်အရောင် ကလဲ အမှိုက်တွေဖုံတွေနဲ့ ရောသွားပြီဆိုကထဲက မူလဓာတ်မရှိတော့ဘူး။ စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် သွေးပဲဖြစ်ဖြစ်။ ယူတတ်သလို ခံစားနိုင်ပါတယ်. ဒီမြို့ ထဲမှာ…..
နေကမြင့်မြင့်လာတယ် ဆိုတော့ နေမြင့်ရင် စိတ်မမှန်တဲ့သတ္တဝါလဲ ရောဂါကရင့်ရင့်လာမယ်…အချိန်ဒီရေ..ကာလကြာစောင့်ဆိုင်းနေရမှုတွေ အမြင့်ဆုံး peak ကိုရောက်လာမယ်လို့ ဆိုချင်လဲဖြစ်တယ်…အဲ ဒီမှာ အုတ်ခဲရင့်ရောင်က ဘာလို့ကြည်လင်လာရတာလဲ… ရွှေအိုရောင်ကရော ဘာလို့ လမ်းမပေါ်ပြန့် ကျဲသွားရတာလဲ… albatross ကရောဘာကောင်လဲ….
နမိတ်ြပကောင်းပေးမယ့် သင်္ဘောနောက်က ပျံသန်းလိုက်ပါလာတဲ့ albatrossငှက်ကလေးကို သင်္ဘောပေါ်ကတစ်ယောက်ကပစ်ချလိုက်တယ်.. albatrossတွေမြို့ ရဲ့လမ်းမတွေမှာ ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့………..
အပေါ်က အယ်လဘတ်ထရော့ စ က အများအတွက်ထွက်လာတယ်… ငါတို့ရဲ့စိတ်လိုက်မာန်ပါရယ်… ကျိန်စာတွေခ သွေးမြေကျခဲ့တယ်.. ဆိုရင်ရှင်းသွားပါပြီ.. မဆင်မခြင်မိုက်မဲမှုကြောင့်ရလာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေ.. နမိတ်ဆိုးတွေ.. ရှေ့မှာသင်္ဘောနစ်ဖို့ကံကြမာဆိုး ကစောင့်နေတယ်… ဒီမြို့ ထဲမှာ…..
အကျပ်အတည်းကိုအတူဖြေရှင်း၊ သောကကိုဝေမျှခံစားမှ ရဲ ဘော်ရဲဘက်အစစ်မဟုတ်လား ၊ အာဃာတတွေ မေ့ ထားလိုက်တော့။ လှိုင်းထန်တဲ့ ပင်လ်ာကိုဖြတ်ရဲပြီ ဆိုမှတော့မုန်တိုင်းကိုတွေးကြောက်နေလို့ ဖြစ်မတဲ့လား။ လုပ်ရမယ့်အရာကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ မှားသလား..မှန်သလား…ယုတ္တိဗေဒ တွေနဲ့ဓာတ်ပြားဟောင်းတစ်ချပ် လာထပ် မဖွင့်နဲ့ တော့.. ဒီမြို့ ထဲမှာ…..
ခရီးကမပြီးသေးဘူး။ ခုနက အယ်လဘတ်ထရော့ စ ကိုပစ်ချပြီး သူ့ ခန်ဓာကို ထမ်းတောင် လာဝံ့တဲ့ကောင်လဲ ဒီလမ်း ဒီခရီး ကိုလျှောက်ရမှာပဲ။လျှောက်နေရတာပဲ။
ခရီးကတော့ ပေါက်လှတာမဟုတ်…သတိတစ်ချက်လွတ်သွားတဲ့အခိုက်မှာတော့ နောက်ကျောကနေ ထိုးလာတဲ့ဓားချက်တွေ….အုတ်နီခဲရင့်ရင့်ရောင် တွေက လမ်းမပေါ် မှာ…ဖွားခနဲ…နောက်တစ်ချီ..သွားပြန်ပြီ…ရှေ့မှာဘာမှလမ်းမရှိတော့လောက်အောင် ကာဆီးခံရ၊ ထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ဆို့ နေပြီဆိုတော့မှ..ကိုယ်နဲ့ ဝေးနေ တယ်ထင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို မြင်အောင်မကြည့်ခဲ့မိတဲ့ဆင်ခြင်တုန်တရားမဲ့မှုကို နောင်တရနေလဲ.. နောက်တော့ကျသွားခဲ့ပြီ…ဒီမြို့ ထဲမှာ…..
ကဲ..အဲဒါတွေကြောင့်ပါပဲ…ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိဘူး။ ဘိုင်ရွန်ဆန်သောမပျောရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ ပဲအဆုံးသတ်ရပြီ။အလိုမကျမှု၊ငြီးငွေ့ မှု၊ ဆင်းရဲမှု၊ လောဘ၊ မောဟ၊ အတ္တ.တွေနဲ့ တောက်လောင်. ကိုယ့်ကျင့်တရားတွေကို ရောင်းချဖလှယ်ကြ၊ အ၀ိဇာတွေနဲ့ ညစ်နွမ်းစွာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဆာဆင်ကြ.. ဘယ်ဟာအမှန်တရားလဲမခွဲခြားနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်စားကျက်ထဲ ၀င်လာရင် ကိုယ့်စားခွက်လုတယ်ပဲ မှတ်နေတော့ ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် တိုက်ထုတ်ပစ်ရမှာလဲ ၀န်မလေးတော့ဘူး…
တစ်ချိန်က တစ်သွေးထဲ တစ်သားထဲ စိတ်ဓာတ်တွေကိုပဲ တောင့်တမိတယ်… မိုးလိုရွာချလိုက်ပါဦးလား.. ခွန်အားတွေထပ်ဖြည့်ပေးပါဦးလား… ဒီမြို့ ထဲမှာ တောင်းဆိုတယ်…
ကဗျာရှင်က ဆိုတယ်…ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်နဲ့ ကိုယ်စွမ်းသမျှလေး ပြန်တည်ဆောက်ကြည့်ရအောင်..အုတ်ခဲရင့်ရောင်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ သတ္တိသွေး ဆိုဆိုပေါ့…မပြိုလဲဖို့ လိုတယ်။ အချင်းချင်း အားပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်..ဟေ့ကောင်...ဟေ့ကောင်. ဟေ့ကောင်. ဟေ့ကောင်...ဟေ့ကောင်. ဟေ့ကောင်…. အထပ်ထပ်သတိပေးတယ်.. ပြောတယ်.. ခေါ်တယ်.. ခွန်းတုန့် မပြန်တာလား.. သေသွားတာလား… ဝေးရာရောက်သွားတာလား.. ပျောက်သွားတာလား… အဖက်မလုပ်တော့တာလား… အဲဒိဟေ့ကောင် ကရဲ ဘော်ရဲဘက်လား.. စိတ်ဓာတ်လား.. သတ္တိလား….. မင်းကွာ ဆိုတဲ့ မချင့်မရဲသံပဲ ပဲ့တင်ထပ်သွားတယ်….. ဒီမြို့ ထဲမှာ…
ဒါပေမယ့်ရပ်ဆဲ(လ)ခေတ်တုန်းက စိတ်ကျရောဂါတွေဓာတုဇီဝ နည်းပညာတွေ ပဋိဇီဝတွေ စိတ်ပညာတွေ ထွန်းကားခဲ့တာမဟုတ်သေးတော့ သူ့ တွေးခေါ်ချက်တစ်ချို့ က ဒီနေ့ ခေတ်နဲ့ချိန်လိုက်ရင် ခေတ်တော့နောက်ကျနေပြီလို့ လဲဆိုကြတယ်။
ကျွန်တော်လဲထင်တယ် ရပ်ဆဲ(လ) ရဲ့ဘိုင်ရွန်ဆန်သောမပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့များ ချဉ်းကပ်ခဲ့ရင် တော့ ဒိထက်ကောင်းတဲ့ ဒသနတွေ သူချပြသွားနိုင်မလားလို့ ပါ။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး က အပိုင်းသုံးမှာ အယ်လ ဘတ်ထရော့(စ) စ၀င်လာတဲ့နေရာပဲ။ ပစ်ချလိုက်တဲ့နေရာရောက်တော့ ရင်ထဲမှာတော်တော်လေး ယူကြုံးမရ ဖြစ်သွားမိစေတယ်။ အပိုင်း ၇မှာ ဟေ့ကောင်. ဟေ့ကောင်…အထပ်ထပ်အော်သံက ဆို့ ဆို့ နင့်နင့်ကြီး ဖြတ်ဝင်လာတယ်။ မလိုအပ်ပဲ စကားလုံးတွေ ထပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ ဒီနေရာကိုတကယ်ခံစားရတယ်…
ကျွန်တော် တတ်သိတဲ့ပညာရှင်မဟုတ်ပါ။ ခံစားမိတဲ့အတိုင်း အလွန်ရှည်လျားစွာ ကွန်မန့် တာပါ။ဒီကွန်မန့် ရေးဖို့ အချိန်အများကြီးယူရပါတယ်။ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြုံလာလို့ ဘာတရန်ရပ်ဆဲ တို့ မပျော်ရွှင်မှု အကြောင်းတရား တို့ ကို ဝေမျှခံစားချင်တဲ့ စိတ်သက်သက်ပါ။ အခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုလဲ ကိုယ်စားပြုနေတယ်ထင်လို့ ပါ။ သူ့ကဗျာက ရှည်သလို နောက်ကြောင်းကလဲ ပေတော်တော်ရှည်တာကိုး။ ဒါမျိုးက တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ စာဖတ်သူနဲ့ အလှမ်းဝေး သွားတတ်တယ်။ ကျွန်တော်ခံစားမိသလောက် အချိန်ကုန်မခံနိုင်သူတွေ ခံစားနိုင်ဖို့ဒီမှာလာပေရှည်လိုက်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် အစအဆုံးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါလား…ကျွန်တော့်လို ခံစားရမလားလို့ …
ခြုံရရင် ဒီမြို့့ထဲမှာ…..ရဲ့ subject, message နဲ့ symbolism တွေကို သဘောကျတယ်။ ကဗျာ အဖွဲ့ ကိုတော့ တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ နည်းနည်း လျော့နေသလိုထင်မိတယ်။ ကျွန်တော်ရေးရင်လဲ ဒီလောက် ကောင်းချင်မှကောင်းမှာပါ။ ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ ဒီလို တွေးပြီးခံစားရတဲ့ နောက်ကွယ်က hidden message တွေနောက်လိုက်ရတာကိုပိုပျော်တယ်။ စာလဲများများဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနောက်ရေးတဲ့ အပေါ်က ကဗျာ အမှန်တရား ကဗျာ ကိုတော့ မှာ…ဒီမြို့ ထဲမှာလောက်မခံစားရဘူး။
တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကတော့ စာရေးတဲ့အခါမှာ တောက်လျှောက်အချိန်မယူနိုင်ပဲ အပြတ်ပြတ် ဆက်ရေးရတာ လှုံှု့ဆော်မှု မုဒ်ကို အားနည်းစေသလို ကဗျာအရှည်ရေးမယ် ရည်ရွယ်ချက်၊ ဖတ်သူနားမလည်မှာ စိုးမိတဲ့စိတ် စတဲ့ "တကူးတက" အရာတွေ မသိလိုက်ပဲ ၀င်လာရင် တင်ပြပုံကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်စေတယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။
ကိုမောင်ရင်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ.. မေ့တော့မလို့။ မောင်တိန်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတာ ပြောလိုပါတယ်။ ဘိုင်ရွန်ဆန်ဆန်မပျော်မှုကို သူ့ပို့စ်တစ်ခုဖတ်ရာက ပြန်သတိရလာခဲ့လို့ပါ။
(အချိန်မရသဖြင့် စာလုံးပေါင်းများ ပါဌ်ဆင့်များ နောက်မှ ပြန်ပြင်ပေးပါမည်။ ယခုကွန်ပြူတာတွင် ရိုက်ရတာ အခက်အခဲရှိပါသည်။ )
Posted by pandora at 5:17 PM 1 comments
Posted by pandora at 5:36 PM 10 comments
Posted by pandora at 12:52 PM4comments
Posted by pandora at 1:24 AM3comments
Posted by pandora at 12:26 AM7comments